Cultivating Peace Culture in Pluralistic Society Sangha Leadership for Positive Social Change Project Education for Peace Project “Young farmer Network for “Food safety and sovereignty” Green Youth for Environmental Justice and Natural Resource Issues We Love Sanlween Myanmar Eco-village Climate Smart Village
Socially Engaged Ethnic Buddhist Youth Network Alumni Core Group Map Youth Peace Leadership Training Alumni Map Sangha Alumni Map Young Environmental Leadership Alumni Map
Book Newsletter Writing Video
Towards holistically developed peaceful and joyful society
Upgrading the capability of KMF’s allianced CBOs in Myanmar, Collaborative actions with those allainced CBOs, Cooperation with other CSOs and Networks, Uplifting KMF’s organizational capacity to implement the strategic missions.
Let's devote ourselves for their sake of others.
ဂေဟဓိက Mobile Application ထုတ်လွင့်
သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်တရားမျှတရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာ အရေး ကိစ္စများနှင့် ပက်သက်သော အရေးကြီးပြီး အသုံးဝင်မည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပြည်သူများအကြား ဖြန့်ဝေနိုင်ရန် ဤ Application ကို ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် မူဝါဒများ၊ လယ်ယာမြေဥပဒေ၊ မျိုးစေ့ဥပဒေ နှင့် တောင်သူအခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် မူဝါဒများ၊ သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိနိုင်ပါမည်။
တောင်သူလယ်သမားများလည်း မိမိတို့ အခွင့်အရေးနှင့် မြယာဥပဒေစသည့် အသိ အမြင်များ၊ ဂေဟအကျိုးပြု စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ကို လွယ်လင့်တကူ ရှာဖွေဆည်းပူးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ပြင် သဘာ၀၀န်းကျင် တရားမျှတရေးရာ ၊ တောင်သူအခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ကြသူများအချင်းချင်းကြားတွင် ဆက်သွယ်ဆက်ဆံနိုင်မည့်နေရာ ၊ သတင်းအချက်လက် ရယူ/ဖြန့်ဝေရာ နေရာ အဖြစ်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးရေး ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တရားမျှတရေးဆိုင်ရာ သတင်းများ
ကိုးကားနိုင်ရန် စာအုပ်များ ၊ ဥပဒေရေးရာ စာအုပ်များ
မိမိတို့ဒေသရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာပြဿနာများကို အချိန်တိုအတွင်း app သုံးစွဲသူများအကြား သတင်းပေးနိုင်ရန် နှင့် သတင်းအချက်အလက်ရယူနိုင်ရန် ။
မိမိတို့ ဒေသ ရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ၊ တောင်သူ့အရေးအရာ ကိစ္စများလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကို တစ်နေရာတည်းတွင် မြင်နိုင်ရန်။ ပူးပေါင်းပါဝင်လှုပ်ရှားနိုင်ရန်။
သင်တန်းအခွင့်အလမ်းများ ၊ အလုပ်အခွင့်အလမ်းများ ကို ဤနေရာတွင် ရယူနိုင်ရန်။
၇။ Website link များ
ဋ္ဌာနဆိုင်ရာ Website များ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ၊ စိုက်ပျိုးနည်းပညာရေးရာ Website များ
(၁၁) ကြိမ်မြောက် သင်တန်းဆင်းများ နှစ်ပတ်လည်တွေ့ဆုံပွဲ
ကလျာဏမိတ္တ ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း၏ သင်တန်းဆင်းများ နှစ်ပတ်လည်တွေ့ဆုံပွဲကုို ဇွန်လ (၁၄) ရက်နှင့် (၁၅) ရက်တွင် ရွှေဘုိုမြို့ နယ် လိပ်ချင်းကျေးရွာတွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်တန်းဆင်းများ စုစုပေါင်း (၁၅၀) ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိုင်ရာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ လူမှုအကျိုးပြု သံဃာတော်များနှင့် သီလရှင်ဆရာလေးများ၊ တောင်သူလူငယ် လယ်သမားများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရပ်ဆုိုင်ရာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသော ဆရာဆရာမများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ရက်တာအတွင် အပြန်အလှန် အတွေ့အကြုံများ၊ တစ်နှစ်တာ လုပ်ငန်းများမှ သင်ခန်းစာများ ဝေမျှခြင်းနှင့် ရုိုးရာကပွဲများနှင့် ဒေသအခြေအနေဆုိုင်ရာ ဆွေးနွေးခြင်းများ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ရှေ့ ဆက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နုိုင်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်းတုို့ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကလျာဏမိတ္တဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ (၁၁)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ Special Talk တစ်ခုကို စီစဉ်ထားပါတယ်။
ပညာရှင်များက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအပေါ် အမြင်များ၊ လူမျိုးရေးဘာသာရေး တင်းမာမှုများနှင့် ရေရှည်တည်သော ဖွဲ့ဖြိုးရေးအကြောင်းတွေကို ပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် တက်ရောက်ချီးမြှင့်ပေးကြဖို့ လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။
Venue:Venue : Pentagon Training and Development Center
Address : no. 389,3rd Floor, Lower Kyee Myin Dine Road, Ahlone Township, Yangon.
Time: 01:00pm to 04:00 pm
To contact: Eain Thu Khin (09459108675)
Address: No.15(A), 3rd Floor, Thapyay Nyo Lane. Sanchaung Township, Yangon, Myanmar.
Saw Ye Win Hein
Phone: 09 445732189
Theme: Majjhima Information Technology Kalyana Mitta Foundation © Copyright 2016. All Rights Reserved.